Cloud Arenti - Arenti & Laxihub
Safidio ny drafitrao
Arenti Cloud dia handraikitra ny rakitsoratry ny hetsika rehefa misy ny fahitana ny fihetsiketsehana, dia hahatratra 3 minitra ny clip hetsika (miankina amin'ny maodely). Hanana iray volana hampiasa io serivisy io ianao.
3 - Andro history Tantara tantara） $ 2.99
7 - Andro history Tantara tantara） $ 4.99
30-Andro （Tantaran'ny video） $ 15.99
Arenti Cloud dia handraikitra ny rakitsoratry ny hetsika rehefa misy ny fahitana ny fihetsiketsehana, dia hahatratra 3 minitra (araka ny maodely) ny clip hetsika. Manana 3 volana hampiasa io serivisy io ianao.
3 - Andro history Tantara tantara） $ 8.37
7 - Andro history Tantara tantara） $ 14.37
30-Andro （Tantaran'ny video） $ 47.37
Arenti Cloud dia handraikitra ny rakitsoratry ny hetsika rehefa misy ny fahitana ny fihetsiketsehana, dia hahatratra 3 minitra ny clip hetsika (miankina amin'ny maodely). Hanana 1 taona hampiasa io serivisy io ianao.
3 - Andro history Tantaran'ny horonan-tsary） $ 30.00
7 - Andro history Tantaran'ny horonan-tsary） $ 50.00
30-Andro （Tantaran'ny video） $ 160.00
Fandraisana an-tsoratra manontolo andro
Arenti Cloud dia manome ihany koa ny safidy fandraketana mandritra ny tontolo andro, firaketana 24/7 (afa-tsy ny fakan-tsary sy ny lakolosim-baravarana video). Hanana iray volana hampiasa io serivisy io ianao.
3 - Andro history Tantara tantara） $ 3.99
7 - Andro history Tantara tantara） $ 6.99
30-Andro （Tantaran'ny video） $ 21.99
Arenti Cloud dia manome ihany koa ny safidy fandraketana mandritra ny tontolo andro, firaketana 24/7 (afa-tsy ny fakan-tsary sy ny lakolosim-baravarana video). Manana 3 volana hampiasa io serivisy io ianao.
3 - Andro history Tantara tantara） $ 11.37
7 - Andro history Tantara tantara） $ 20.37
30-Andro （Tantaran'ny video） $ 65.37
Arenti Cloud dia manome ihany koa ny safidy fandraketana mandritra ny tontolo andro, firaketana 24/7 (afa-tsy ny fakan-tsary sy ny lakolosim-baravarana video). Hanana 1 taona hampiasa io serivisy io ianao.
3 - Andro history Tantaran'ny horonan-tsary） $ 40.00
7 - Andro history Tantaran'ny horonan-tsary） $ 70.00
30-Andro （Tantaran'ny video） $ 220.00
Ezaka arentiety ho an'ny fiarovana ny fiainana manokana
Fiarovana amin'ny fiainana manokana
Arenti dia manome lanja hatrany ny fiarovana ny tsiambaratelo ho an'ny mpanjifa. Hatramin'ny nahaterahan'i Arenti, dia miezaka izahay amin'ny lafiny rehetra amin'ny dingana fampandrosoana, ao anatin'izany ny fitaovana, fampiharana ary mpizara.
Ny fakantsarintsika dia noforonina miaraka amina fizotry ny encryption amin'ny alàlan'ny algorithm AES-128. Ny angon-drakitra rehetra dia hohafinafina, ao anatin'izany ny hafatry ny hetsika, ny baiko fanaraha-maso, ny streaming ho an'ny seho mivantana, ny fitehirizana rahona ary ny fitehirizana eo an-toerana.
AES-128 dia algorithm fampiasa enkripsi avo lenta sy avo lenta ary eken'ny indostria.
Ny fakan-tsary rehetra dia manohana fombafomba manokana. Ny mpampiasa dia afaka manamboatra ny toetoera on / off an'ny solomaso. Raha tsy misy ny toerany dia tsy misy data hafindra ao amin'ilay fitaovana. Mandritra izany fotoana izany, ny ampahany amin'ireo maodely dia misy fiasa ara-batana ara-batana, hihodina miafina ny solomaso. Izany dia mahatsapa ny fiarovana manokana.
Ao anatin'ny fifandraisana tanteraka eo amin'ny fitaovana, ny mpizara ary ny rindranasa, ny fampitana data rehetra dia atao amin'ny alàlan'ny HTTPS, nohamafisin'ny algorithm SSL, ao anatin'izany ny streaming, ny message event ary ny control control.
SSL no fenitry ny indostrian'ny fifandraisana azo antoka, izay afaka miaro amin'ny fomba mahomby ny fampitana data ao amin'ny tambajotra.
Manampy ny fanamarinana fototra ihany koa izahay amin'ny fampitana P2P ampiasaina amin'ny streaming, manamafy ny fiarovana ny angona.
Misafidy ny AWS ho mpiara-miasa amin'ny rahona tokana izahay. Ny serivisy rehetra dia aorina amin'ny alàlan'ny AWS, tsy misy mpamatsy rahona hafa satria AWS no mpamatsy tolotra rahona malaza indrindra ho an'ny indostria ho fiarovana sy fiarovana manokana.
Ho an'ny mpampiasa, ny antontan-kevitra lehibe indrindra dia ny mari-pahaizana momba ny kaonty. Ao amin'ny mpizara, ny kaontin'ny kaonty dia voahodina miaraka amin'ny AES-128.
Mampiely mpizara AWS manerantany izahay. Mpizara telo no miorina misaraka any Etazonia, Alemana ary Shina, manompo ireo faritra manerantany. Ny angon-drakitry ny faritra tsirairay dia ho tahirizina amin'ny mpizara mifanaraka aminy ihany.
Ny fanamarinana dingana roa dia ampiasaina amin'ny fidirana Arenti App. Rehefa manova ny kaontin'ny kaonty na ny fidirana lavitra ny mpampiasa dia halefa ny kaody fanamarinana ho fanamarinana dingana roa.
Mandritra izany fotoana izany, Arenti App manangona angon-drakitra finday tena manome fahafaham-po tanteraka ny takiana amin'ny lalàna iraisampirenena.